Becas မသန်စွမ်းအိပ်မက်ကိုမြင်: cuálesမြက်ပင် disponibles
Becas မသန်စွမ်းအိပ်မက်ကိုမြင်Acción Diferida (DACA) aprobada con
Ayuda စီးပွားရေးမသန်စွမ်း Que los အိပ်မက်ကိုမြင် cumplan su sueñoက de estudiar
en los Estados UNIDO los Estudio universitarios ဟန်ဆီဒို, tradicionalmente, un camino Que abre mejores posibilidades စီးပွားရေး။
cambio rápido y က continuo en Aunque se vive en una sociedad, los universitarios sufren, ယေဘုယျ en, က de una tasa က de desempleo စရဖဘာဟာက y obtienen puestos mejor pagados ။
pero Las Universidad y ကကောလိပ်က de los Estados UNIDO သား muy caros ။ Y က, en muchos casos, los အိပ်မက်ကိုမြင် con Acción Diferida aprobada သား excluidos de las posibles ayudas ။
အဘယ်သူမျှမဖက်ဒရယ်တစ် Las Que tienen un carácter acceder pueden por ejemplo ။
သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, Si Que es posible encontrar ayuda စီးပွားရေးက de manera indirecta y က directa ။
primer ခဲ့သည်များ en, verificar si se "ပြည်နယ်ထဲမှာ" un estado Que Permit တစ် los ရွှေ့ပြောင်း con una Acción Diferida aprobada aplicar por ပါဂိုက de matrícula como en နေထိုင်ကြသည်။ "ပြည်နယ်ထဲက" hay Que pagar, pero mucho menos Que si se Tien Que abonar una matrícula como ။
gestionadas becas segundo ခဲ့သည်များ, မြက်ပင် en တစ်ဦး Las Que se pueden tener acceso privadamente ။
Fondo က de Becas မသန်စွမ်းလက်တင်အမေရိကန်တွေ
ပါမစ် aplicar တစ် ciudadanos, residentes Permanente ဥပဒေရေးရာ, asilados, refugiados, cubanos y က haitianos con လြှို့ဝှကျစကားက y tambiénတစ်အိပ်မက်ကိုမြင် con Acción Diferida ။
လာ့စ်ဗီး becas pueden siendo la ir က de los $, 1000 တစ် los $ 10000, မီဒီယာ $ 2500 က de ။ se puede aplicar မသန်စွမ်း recibir ayuda မသန်စွမ်း estudiar en အဝန်းကောလိပ်များ (también conocidos en algunos estados နည်းပညာကောလိပ်များဏ como အငယ်တန်း), ကောလိပ်များ y က Universidad de cuatro añosအီး incluso မသန်စွမ်း Estudio က de posgraduado ။
Aquí puedes informarte က de los tres requisitos básicosမသန်စွမ်း presentar una solicitud အယ်လ် Fondo က de Becas မသန်စွမ်းလက်တင်အမေရိကန်တွေ က y un enlace တစ် los diferentes tipos က de beca Que se ofrecen က y el formulario မသန်စွမ်း aplicar (es gratis) encontrarás။
အယ်လ် Fondo Nacional de Becas TheDream.Us
Tien en sus cuentas varios millones က de dólaresမသန်စွမ်း apoyar la educación universitaria က de los အိပ်မက်ကိုမြင်။
si eres un အိပ်မက်ကိုမြင်ဏတစ်ဦး UNO, considera esta oportunidad conoces ya Que puedes ganar una beca က de hasta un máximoက de $ 25,000 ။ မသန်စွမ်း aplicar necesitas cumplir los siguientes requisitos:
Haber la Acción Diferida (DACA) solicitado tenerla aprobada ဏ။
Haber estudiado en un High School တွင် en los EEUU y က tener una calificaciónမီဒီယာက de သာလွန် 2.5 ဏ။ အို tener un GED Que pueda SER considerado equivalente တစ် ESA calificación။
los requisitos မသန်စွမ်း la Acción Diferida todo Reunir ။
အဘယ်သူမျှမ estar cursando Estudio universitarios ဏ, si se está, tener menos က de 12 créditos cursados ​​။
အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များဏ Solicitar ingresar မသန်စွမ်း cursas Estudio universitarios en UNO က de los siguientes ကောလိပ်များ: Long Beach စီးတီးကောလိပ်, Long Beach, သုံးပါးတစ်ဆူဝါရှင်တန် Univerity, မိုင်ယာမီ Dade ကောလိပ်, Kingsborough ကွန်မြူနတီကောလိပ် (NY), Bronx ကွန်မြူနတီကောလိပ်, မန်ဟက်တန်ကွန်မြူနတီကောလိပ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Univerity , အယ်လ် Paso ကွန်မြူနတီကောလိပ်, အယ်လ် Paso မှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်, တောင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကောလိပ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ပန်အမေရိကန် Univerity က y la Universidad por အင်တာနက်တောင်ပေါ်ကဝါရှင်တန်ကောလိပ်။
Además, si contacta con la organización porque puede Que puedas también aplicar en un အိပ်မက်ကိုမြင် pero Tien estatus က de Protecciónယာယီ (TPS), determinadas circunstancias eres မျှ။
el 31 က de marzo က de cada año finaliza el plazo မသန်စွမ်း aplicar ။
un futuro mejor está en tus Mano မှ။ y ကိုအဘယ်သူမျှမ dejes escapar este tren အဆိုပါ TheDream.Us becas de las Infórmate။ te mereces una buena educación။
y က Universidad privadas (incluso algunas Publica) Si Que becan တစ်အိပ်မက်ကိုမြင် instituciones Muchas, incluidas estas 13 Universidad de Elite ။
Reglas diferentes en cada estado
es muy importante tener en cuenta Que los estados regulan က de manera distinta el တစ်ပြည်နယ်ကျူရှင်အတွက် acceso တစ် becas estatales y က incluso préstamos acceso ။ es muy importante, si se está en အမေရိကန်နိုင်ငံ como indocumentado, tener conciencia de las distintas leyes estatales မရှိ porque los estados tratan igual el တေ todo de la falta က de papeles migratorios ။ lo cual puede derivar en importantes consencuencias prácticas။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los muchachos indocumentados Que ဟန် trabajado y က pagado impuestos con un número ITIN y ကdespués obtienen mediante DACA un número del လူမှု verdadero, deben el cambio reportar ။
Siempre es importante မျှ tener problemas ဥပဒေရေးရာ, lo pero es todavíaစရဖ si se está en situaciónက de indocumentado ။ ello por, debe saberse Que Las relaciones လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ con un menor က de edad AUN cuando သား consentidas အီး incluso entre novios puede Dar ခဲ့သည်များတစ် situaciones က de delitos ဏ faltas ။ es recomendable conocer la ley Que aplica en cada estado ။
Dónde enviar la solicitud မသန်စွမ်း la greencard por matrimonio
Las ဗီဇာ Toda Estas သားတစ်ဦး Estados UNIDO ingresar မသန်စွမ်း posibles
Turista: Que pasa si se queda en အမေရိကန်နိုင်ငံစရဖ tiempo del permitido
EE.UU. en ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာက F-1 F-3, J-1, က M-1 က y က M-3 မသန်စွမ်း estudiar အထက်တန်းကျောင်း
ပါဂိုက de impuestos က de americanos Que residen fuera က de Estados UNIDO
13 puntos Que debes ဖုံးကိုဓားရှည် sobre la ဗီဇာက de turista မသန်စွမ်း menores
အရွယ်ရောက်ပညာရေးကိုရှာပါနှင့်မီချီဂန်ထဲမှာ GED ရယူနိုင်သောလုပ်နည်း
သင့်ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှလိပ်ပြာဆွဲဆောင် 10 သိကောင်းစရာများ
အရီဇိုးနားပြည်နယ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
သင်ကသင့်ရဲ့ခရစ်ယာန်တေးဂီတအတွက်စန္ဒယား-မောင်းနှင်အမျိုးသားအသံလိုပဲ အကယ်. ....
သင်ကြားရေး၏ ABCs: ဆရာများအဘို့အကတိသစ္စာပြု
စက်တင်ဘာလ 11, 2001 အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ - 9/11 တိုက်ခိုက်မှု
အီကွေဒေါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီးတောင် Cayambe အကြောင်းအချက်အလက်
မကောင်းပါ Scooping သလဲ?
အခမဲ့ပြင်သစ် Apps ကပ
'' ကြစို့ '' ဘာသာပြန်ဆို
ယင်းသော Sans-culottes သူကားအဘယ်သူရှိသနည်း
Cuzco, ပီရူး: အအင်ကာအင်ပါယာ၏ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးနှလုံးသား
1812 ၏စစ်ပွဲ: အထွေထွေဝီလျံဟင်နရီ Harrison
အဘယ်ကြောင့် 1940 အိုလံပစ်ကျင်းပမခဲ့သလော
အီတလီကြိယာ conjugation: Scoprire
တစ်ပိုးနသန်းကောင်နှင့် Millipede အကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြပါလုပ်နည်း
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမတူကွဲပြားခြင်းနှင့်လူနည်းစုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပံ့ပိုးဖို့6နည်းလမ်းများ